boka Professor China Ma Jun rinoratidza kuti Kamudzira uchisvibisa mashandiro regiravhiti-vadzingirwa zvedongo Kamudzira filtration Manufacturers uye Suppliers | Yongxin
boka Professor Ma Jun rinoratidza kuti Kamudzira uchisvibisa mashandiro regiravhiti-vadzingirwa zvedongo Kamudzira filtration
Maererano Heilongjiang Daily News, April 13, 2019, tsvina yava mvura yakachena, mvura gungwa yava mvura yakachena, uye mvura rava mvura yakachena. Masayendisiti ave kutaura kwesainzi, nerukudzo-nemhepo zvedongo Kamudzira filtration zvemichina kunokosha hwokugadzira zvinoreva kuti vawane chinangwa ichi. The mashandiro ari filtration kunyatsoshanda pakati zvedongo membranes asina pachena kwenguva refu. Musi wa12, Harbin Institute of Technology akaita ichangoburwa kwesayenzi nokubudirira. Zvokutsvakurudza Boka kwezvakatipoteredza chikoro rechikoro, Ma Jun, tanga akazivisa ukama pakati zvedongo membranes uye Zvinosvibisa. The kukurukurirana ukama inopa inokosha yokungotaura hwaro zvedongo Kamudzira selection, kugadzirira, nadzurudzo uye Kamudzira filtration waivako Optimization, izvo zvinokosha zvikuru mishonga mvura.
Maererano nemishumo, giravhiti-inopepereswa zvedongo Kamudzira chinhu chinokosha mvura kurapwa michina, iyo pfungwa zvikuru nokuda kwayo zvakaisvonaka maitiro akadai yakaderera simba rakawanda, yakatsiga kuvhiyiwa uye nyore yokuzvigadzirisa. Mukubata mvura, tsvina kurapwa, shandisazve mvura, kuparadzana yemafuta uye mvura, vasanaiwa nemvura Utilisation, mhuri kunwa mvura kurapwa uye mvura yomugungwa pretreatment vane wakafara kushanda potentials. Zvisinei, kuti mashandiro ose dzinosvibisa kuvhura uye Kamudzira uchisvibisa panguva nokushanda regiravhiti-vadzingirwa membranes ndiyo chinoumba nyaya kukanganisa Kamudzira filtration kunyatsoshanda, uye "mhinduro" hapana wawanikwa.
The Mutauriri of michina zvabuda akaudza mutori kuti chikwata mapurofesa pakati Harbin Da Majun pakutanga akaratidza kuti electrostatic kusakarongeka pakati Kamudzira uye contaminant pasi ezvinhu yakaderera kumanikidzwa hydraulic simba zvikuru anosarudza kuti filtration kunyatsoshanda kuti regiravhiti nemhepo zvedongo Kamudzira, uye electrostatic kusakarongeka pakati Kamudzira inowanikwa. Kuvhiringidzwa ari yekudyidzana kunowedzerwa sezvo nemotokari kufurirwa ipfupi. Saka, nokuchinja magetsi ehupfumi ari zvedongo Kamudzira inowanikwa, ari filtration chokupika kukomba-rinosundwa zvedongo Kamudzira zvichabviswa akavandudzika zvikuru. Izvi zvakawanikwa achava zvikuru muupenyu giravhiti-inopepereswa zvedongo Kamudzira michina, kuwedzera mvura kurapwa kunyatsoshanda uye kuderedza mvura kurapwa mari.
Kubudirira uku kwave rakabudiswa somunhu womumhuri ari pose mbiri magazini Environmental Science and Technology.
Nano Filtration Membrane System , Tubular Ceramic Membrane , Micro Filtration Membrane , Ultrafiltration Water Treatment System , Inorganic Membrane, Ultrafiltration Water Filter ,